Umshini wokuhlobisa isimu: sidala umhlobiso wangempela wesiqephu ngezandla zethu
Ukuzibandakanya, Yenza ngokwakho
Imishini yokuhlobisa ingadi, eyenziwe ngezandla zayo, ithola ukuthandwa njengomhlobiso wokuqala wezindawo zasemadolobheni.
Yikuphi okumele ukhethe?
Izakhi ezinjalo ze-landscape design zingadlala indima yokuhlobisa, futhi ingathwala umthwalo othile osebenzayo. Konke kuncike ekusebenzeni kwazo nezinhloso zabo. Umshini ongcono kakhulu wensimu (ngezandla zawo ukwenza kube nzima kakhulu) ukufihla ngokuphelele amaphutha kwezinye izindawo futhi ukufihleka ngokuthembekile ngokubheka konke ukushiyeka: amapayipi ahamba phambili, amashintshi wokugcoba amanzi , njll. Amakholi anjalo angaba usayizi ophansi kakhulu, ngokuvamile ukuphakama kwawo akudluli isigamu semitha . Futhi izakhi ezingaphezulu zomzimba zingasetshenziswa ngempumelelo ukuze zifakwe kwindlu yangasese yomgwaqo, igumbi elidala kanye nezinye izakhiwo ezingadini ezingabonakali.
Imishini yokuhlobisa ingadi, eyakhelwe ngezandla zayo, ingaba nobukhulu obukhulu nakakhulu. Ngezinye izikhathi indawo yalezi zakhi ikuvumela ukuthi udale i-gazebo ethokomele noma i-shed for storage of amathuluzi engadini ngaphakathi kwesakhiwo . Yiqiniso, ukwakhiwa kwezakhiwo ezinjalo - umsebenzi udla isikhathi esiningi futhi udinga amanye amakhono ekusebenzeni ngezinto zokwakha.
Olunye uhlobo lwezakhiwo lungumshini wokuhlobisa amanzi wensimu. Noma ubani ofisa angakha isakhiwo esinjalo ngezandla zakhe. Kungcono ukufaka izakhi ezifanayo eduze nendawo ekhona kakade emzimbeni wamanzi: yemvelo noma yokufakelwa. Eduze emgodini wamanzi, ungahlela indawo enhle yokuphumula: emva kosuku olukhuni kuyoba mnandi kakhulu ukubuka ama-jets amanzi awela phansi emagayeni bese ewela echibini.
Imishini yokuhlobisa ingadi enezandla zakho: izigaba zomsebenzi
Ukwakha isici esinjalo sokuqala ukuhlobisa izwe lakho, akudingeki wenze umzamo omkhulu futhi uthenge izinto ezibiza kakhulu. Umshini ovamile owakhiwe unomsebenzi olula, futhi ungakhiwa kusuka ekuthuthukiseni izindlela. Njengoba ubuncane bezindleko, uzoba nomshini omuhle wegadi, ozoba umhlobiso omuhle wendawo yakho.
Kuwebhusayithi ekhethiwe kuyadingeka ukumba umgodi hhayi ngaphansi kwamamentimitha angama-25 ejulile. Ingaphansi kwesisekelo kufanele ibekwe ngetitini ephukile futhi ithululelwe ngodaka lwamatshe. Khona-ke udinga ukwenza uhlaka lwesakhiwo esizayo. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa noma yiluphi uhlobo lwezinto ezibunjwa nge-cone: amabhakede amadala, amabhasi, njll. Isisekelo somgodla singenziwa kusuka kumathayi endala. Engxenyeni engenhla yefreyimu, imbobo encane kufanele icubungulwe - lapha amaphiko esakhiwo azofakwa kamuva. Umzimba kufanele ugqoke ngokucophelela ngekhonkrithi futhi uhlanganiswe ngamatshe okuhlobisa noma izinsalela ze-slaving slabs. Emva kwalokhu, amaphiko amapulangwe egazini afakwe emgodini olungiselelwe. Kufanele zidwetshwe kusengaphambili futhi zomiswe ngokuphelele.
Lesi sibonelo singathathwa njengesisekelo sokwakhiwa kwezakhiwo ezinjalo. Futhi ubukhulu babo, ubujamo nezinto eziphathekayo zingahluka kakhulu - konke kuxhomeke ekuthandeni nasezifisweni zakho.
Indlela yokwenza uqobo ngokwakho: izincomo
Izimoto ezenziwe ngokwenza izimoto. Izibonelo
Ukwenza izitebhisi zokhuni ngezandla zakho: imidwebo. Ubuchwepheshe bokukhiqiza izitebhisi zokhuni
Ukukhanyisa ekhishini: kanjani ukudweba ukulula kwe-LED nokunethezeka
Cesspool ngezandla zakhe - kungenzeka yini? Ukwakhiwa kahle kwamanzi emanzini okukhonkolo.
Izandla nezingane: kanjani ukwenza isoso esindizayo
PSA Imininingwane: izici futhi ulinganisele
Ukudla kwasekuseni Kuhle eMoscow - lakhetsiwe amathilomu nezindawo zokudlela
"Sherpa" - kuyini? Rover "Sherpa"
Flying Fish - yokuthengisa shaya emhlabeni amathoyizi zezingane
Inhloko-dolobha ye Khazars, lakhiwa e emlonyeni iVolga - Itil. Inhloko-dolobha ye Khazar Khanate
Kuyini Trichomonas lezinkinobho?
Incazelo unodoli vanka vstanka zingase zihluke, njengoba emelelwe sebuningini kwezithombe
I elikhulu Hadron Collider sigxile kuphi ososayensi emhlabeni wonke
Umeme abadlali: ". Isinqumo oPhethe" Indaba emfushane nezinhlamvu ashisa izikhotha
Ngemva ufaka i-Windows 7 ikhompyutha kubambezela: yini okufanele uyenze?